Tenga Mini Inotakurika T-shirts Kupisa Kudhinda Dhinda Muchina Wekudhinda - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Mini Inotakurika T-shirts Kupisa Kudhinda Dhinda Muchina Wekudhinda
$97.99 Regular price $139.99
ruvara Green EU plug 220v Green US plug 110v Tsvuku EU plug 220v Tsvuku US plug 110v Bhuruu EU plug 220v Bhuruu reUS plug 110v Green UK plug 220v Tsvuku UK plug 220v Bhuruu UK plug 220v
Ngarava Dzinobva nyika dzakabatana China Czech Republic JERIMANI
Green EU plug 220v / United States Green EU plug 220v / China Green US plug 110v / United States Green US plug 110v / China Tsvuku EU plug 220v / United States Tsvuku EU plug 220v / China Tsvuku US plug 110v / United States Tsvuku US plug 110v / China Bhuruu EU plug 220v / United States Bhuruu EU plug 220v / China Bhuruu US plug 110v / United States Bhuruu US plug 110v / China Bhuruu EU plug 220v / Czech Republic Bhuruu US plug 110v / Czech Republic Green US plug 110v / Czech Republic Green EU plug 220v / Czech Republic Tsvuku US plug 110v / Czech Republic Tsvuku EU plug 220v / Czech Republic Green UK plug 220v / China Green UK plug 220v / Czech Republic Tsvuku UK plug 220v / United States Tsvuku UK plug 220v / China Tsvuku UK plug 220v / Czech Republic Bhuruu UK plug 220v / United States Bhuruu UK plug 220v / China Bhuruu UK plug 220v / Czech Republic Green UK plug 220v / United States Green EU plug 220v / GERMANY Tsvuku US plug 110v / GERMANY Tsvuku EU plug 220v / GERMANY Bhuruu UK plug 220v / GERMANY Green UK plug 220v / GERMANY Tsvuku UK plug 220v / GERMANY Bhuruu EU plug 220v / GERMANY Bhuruu US plug 110v / GERMANY Green US plug 110v / GERMANY
Mini Inotakurika T-shirts Kupisa Kudhinda Dhinda Muchina Wekudhinda - Green EU plug 220v / United States yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Chinyorwa: plastiki nepfungwa
Model Nhamba: E67423
Type: Muchina Imprimerie
Zvimiro: Mini-Dhinda T-shati Yekudhinda Muchina
Chimiro: Sublimation Stamping Machine
Ramba uchivandudza mhando, zvese zvese zvakanyatso kupurisirwa
Super yakanaka mubato dhizaini.
Yakakwira-mhando anti-scalding base.
Ultra-yakasimba ndiro yepasi.
Beep kana iyo tembiricha yakatarwa yasvika.
Yakagadzirirwa kupisa kupisa pad.
Yakasarudzika otomatiki vibration basa.
Yakagadziridzwa dhizaini & Inotakura Kesi: Mubato wakaita semoyo unoita kuti igadzikane uye yakanaka. Isa bhokisi rekuchengetera riri pachena, richiri kutaridzika kunge mifananidzo. Iko kune rekuwedzera bhegi rekuchengetedza, Insulation sponge pad uye yekudiridza gaba. Mwaya shoma mvura pamberi pega kuI Ironing kuchaita kuti basa rako rive nyore.
Simple Mode & Professional Mode: iyo yakapusa modhi ine tembiricha ina, uye iyo yekushandisa nguva inogona kunge iri pakati pe4-10 masekondi. Iyo yehunyanzvi modhi inogona kusetwa chero kupi tembiricha pakati pe120-284 ° F uye iyo yekushandisa nguva inogona kuve chero iri pakati pe410-10 masekondi. Iyo yakakosha mashandiro nzira yakaomarara, ndapota tarisa kuiri bhuku.
Otomatiki Kudzvanya Basa & Yakagadzika Pazasi Plate: painotanga kushanda, inozozvitetemesa yega kuti uwane iko kudzvanya mhedzisiro. Hwendefa repazasi rakagadzirwa nesimbi yakasarudzika chrome zvinhu, izvo zvinogara zvakasimba, hapana chikonzero chekushushikana nezvekukuvara kwezvikamu munguva pfupi.
Inofungisisa & Inoshandiswa Zvakakura: Diki uye nyore kutakura. Inokodzera kuendesa mapikicha kana zvinyorwa paT-shirts, zvipfeko, mabhegi, mameti yemakonzo, ngowani, shangu, mhuka dzakapetwa, nezvimwewo Kuchengetedza, ndokumbira umirire kuti utonhore pasi zvachose usati wachengeta. Pachave nebhipu painopisa kune yakatarwa tembiricha, uye inozongodzima yega kana isiri kutanga basa mushure memaminitsi makumi matatu.
Easy modeTemperature yekumisikidza renji: 4 tembiricha, 284 ° F / 329 ° F / 365 ° F / 410 ° F. Nguva yekumisikidza renji: 10-120 masekondi.
Unyanzvi hwakawanda tembiricha yekumisikidza renji: chero tembiricha iri pakati pe284-410 ° F. Nguva yekumisikidza renji: 10-999 masekondi.
Yakanaka, yakaenzana nemufananidzo, inoshanda nemazvo, ini ndinoda zvishoma. Iko kutakura kwaive nekukurumidza chaizvo.
Izvo zvakaenzana nerondedzero, nekutsikirira hapana dambudziko kana uchitora tembiricha, nekukurumidza kusvika
Ndinoda muchina wangu mutsva! Ini ndatoedza kuti inoshanda zvakanyanya kunaka! Yazadzisa zvese zvandinotarisira, kutumira nekukurumidza kuChile ndinokurudzira 100% kuchitoro ichi